Taolan-tehezana amin'ny saosy labiera, manankarena ary mora omanina. | Recipe ao an-dakozia
Taolan-tehezana amin'ny saosy labiera
Montse Morote | 18/05/2021 09:00 | Entries mafana, Resety hena
Taolan-tehezana amin'ny saosy labiera. Iza no tsy tia taolan-kisoa? Eny, ireto miaraka amin'ny saosy labiera izay itiavanao azy betsaka, lovia tsotra azo amboarina ary misy valiny tena tsara, tena tsara izy ireo, malefaka ary be ranony ary misy saosy handrobohana mofo.
ny tena be ranony ny taolan-tehezana ary koa hena toekarena, izany no ahafahantsika manomana lovia tsara nefa tsy mandany be.
LTaolan-kisoa amin'ny labiera Izy io dia lovia izay azontsika omanina mialoha, azontsika atao ny manomana azy isan'andro, iray lovia izay azo ampiarahina amin'ny ovy nendasina, legioma, holatra….
Fomba iray hafa hanomanana taolan-tehezana, miaraka amina singa vitsivitsy izay ho tian'ny fianakaviana iray manontolo.
Fotoana fiomanana: 15 M
Fotoana hiketrehana: 30 M
Fotoana manontolo: 45 M
Taolan-kisoa 1 kilao
Jirofo 2 tongolo lay
Labiera 1 kapoaka 330ml.
Mba hanomanana ny taolan-tehezana amin'ny saosy labiera dia diovina aloha ny taolan-tehezana, hetezo kely, manamasaha dipoavatra sy sira.
Ao anaty vilany no asian-tsolika misy diloilo tsara rehefa mafana ny menaka, volontany amin'ny tany ambony hafanana ny taolan-tehezana mandra-pahatonga azy ireo ho volontany volamena.
Tetehina ny tongolo sy tongolo gasy, rehefa volamena ny taolan-tehezana ampio ny tongolo.
Afangaroy izahay ary avela minitra roa, mba hiara-masaka ny zava-drehetra ary tototra ny tongolo ary arotsaka ny tongolo lay voatetika.
Sasao mandritra ny minitra vitsy ny zava-drehetra, ampio ny labiera, avelao ny alikaola hipoitra mandritra ny minitra vitsy ary asio rano kely vera, sira kely ary avelao izy hahandro mandritra ny 30 minitra.
Aorian'ity indray mitoraka ity dia manandrana ny sira izahay, jereo raha malemy ny taolan-tehezana, manitsy ary mamono.
Ary ho vonona hihinana izy ireo !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » Entries mafana » Taolan-tehezana amin'ny saosy labiera
Ovy misy fromazy sy bacon
Salady Chickpea miaraka amin'ny salmon, avocado ary ovy